Bhuku Rekutanga reMadzimambo 10:1-29
Mambokadzi weShebha anoshanyira Soromoni (1-13)
Pfuma zhinji yaSoromoni (14-29)
10 Mambokadzi weShebha akanzwa mashoko pamusoro paSoromoni ane chekuita nezita raJehovha,+ saka akauya kuzomuedza nemibvunzo yakaoma.*+ 2 Akasvika muJerusarema aine vanhu vakawanda vaimuperekedza+ nengamera dzakanga dzakatakura mafuta ebharisamu+ negoridhe rakawanda chaizvo nematombo anokosha. Akapinda maiva naSoromoni akamubvunza zvese zvaiva mumwoyo make. 3 Soromoni akabva amupindura mibvunzo yake yese. Hapana chakanga chakaomera* mambo kuti amutsanangurire. 4 Mambokadzi weShebha paakaona uchenjeri hwese hwaSoromoni,+ neimba yaakavaka,+ 5 nezvekudya zvaiiswa patafura yake,+ nekugara kwevashandi vake patafura, nebasa revashandi vake vaiuya nezvekudya patafura, nezvipfeko zvavo, nevadiri vake, nezvibayiro zvake zvinopiswa zvaaigara achipa paimba yaJehovha, akashaya neremuromo.* 6 Saka akati kuna mambo: “Mashoko andakanzwa nezvenyu ndiri kunyika yangu pamusoro pemabasa amakaita* uye pamusoro peuchenjeri hwenyu aiva echokwadi. 7 Asi handina kutenda mashoko acho kusvikira ndauya ndikazvionera nemaziso angu. Zvandakaudzwa hazvitombosviki pahafu yezvandaona. Uchenjeri nekubudirira kwenyu zvinopfuura nekure mashoko andakanzwa. 8 Vanofara varume vanoita basa renyu, uye vanofara vashandi venyu vanomira pamberi penyu nguva dzese, vachiteerera uchenjeri hwenyu!+ 9 Jehovha Mwari wenyu ngaarumbidzwe,+ uyo akakufarirai akakugadzai pachigaro cheumambo chaIsraeri. Rudo rwaJehovha kuna Israeri haruperi, ndokusaka akakugadzai kuva mambo kuti mutonge zvakanaka uye zvakarurama.” 10 Akabva apa mambo matarenda* 120 egoridhe nemafuta ebharisamu+ akawanda chaizvo nematombo anokosha+ akawanda chaizvo. Hakuna kuzombounzwa mafuta ebharisamu akawanda seakapiwa Mambo Soromoni namambokadzi weShebha. 11 Ngarava dzaHiramu idzo dzaitakura goridhe kubva kuOfiri+ dzaiuyawo nematanda emiarigamu+ akawanda chaizvo nematombo anokosha.+ 12 Achishandisa matanda acho emiarigamu, mambo akagadzira mbiru dzeimba yaJehovha nedzeimba yamambo,* uyewo udimbwa nezviridzwa zvine tambo zvevaimbi.+ Matanda emiarigamu akadaro haana kuzombounzwazve kana kuonekwa kusvikira nhasi. 13 Mambo Soromoni akapawo mambokadzi weShebha zvese zvaaida uye zvaakakumbira, tisingabatanidzi zvaakamupa asina kukumbira.* Pashure paizvozvo, akasimuka akadzokera kunyika yake, pamwe chete nevaranda vake.+ 14 Uremu hwegoridhe raiuya kuna Soromoni mugore rimwe chete hwaiva matarenda 666,+ 15 tisingabatanidzi raibva kuvanhu vaifamba vachitengesa uye remubereko waibva kune vamwe vaiita zvekuchinjanisa zvinhu uyewo raibva kumadzimambo ese evaArabhu nemagavhuna enyika. 16 Mambo Soromoni akagadzira nhoo huru 200 achishandisa goridhe rakanga rakasanganiswa nedzimwe simbi+ (nhoo imwe neimwe yakaiswa mashekeri* 600 egoridhe)+ 17 nenhoo diki* 300 dzegoridhe rakasanganiswa nedzimwe simbi (nhoo diki imwe neimwe yakaiswa mamaina* matatu egoridhe). Mambo akabva adziisa muImba yeSango reRebhanoni.+ 18 Mambo akagadzirawo chigaro chikuru cheumambo nenyanga dzenzou,+ akachiisa goridhe rakanatswa.+ 19 Paiva nemasitepisi 6 aikwira kuchigaro chacho, uye nechekumashure kwacho chaiva nedenga rakaita raundi, uye kumativi ese echigaro chacho kwaiva nezvekutsamidzira maoko, uye shumba mbiri+ dzakanga dzakamira pedyo nezvekutsamidzira maoko. 20 Paiva neshumba 12 dzakanga dzakamira pamasitepisi acho 6, sitepi rimwe nerimwe riine shumba kumativi aro maviri pamasitepisi acho ese 6. Hapana humwe umambo hwakanga hwambogadzira chigaro chakadaro. 21 Midziyo yese yekunwira yaMambo Soromoni yaiva yegoridhe, uye midziyo yese yeImba yeSango reRebhanoni+ yaiva yegoridhe rakanatswa. Pakanga pasina chakagadzirwa nesirivha, nekuti sirivha yaisamboonekwa sechinhu mumazuva aSoromoni.+ 22 Nekuti mambo aiva nengarava dzeTashishi+ dzakawanda dzaiva mugungwa pamwe chete nengarava dzaHiramu. Kamwe chete pamakore matatu ega ega, ngarava dzacho dzeTashishi dzaiuya dzakatakura goridhe, sirivha, nyanga dzenzou,+ tsoko, nemapikoko. 23 Saka Mambo Soromoni aiva nepfuma+ neuchenjeri+ kupfuura mamwe madzimambo ese epanyika. 24 Uye vanhu vese vepanyika vaida kutaura naSoromoni* kuti vanzwe uchenjeri hwake, hwakanga hwaiswa mumwoyo make naMwari.+ 25 Mumwe nemumwe aiuya nechipo: zvinhu zvesirivha, zvinhu zvegoridhe, nguo, zvombo, mafuta ebharisamu, mabhiza nemanyurusi, uye izvi zvairamba zvichiitika gore negore. 26 Soromoni akaramba achiunganidza ngoro nemabhiza;* aiva nengoro 1 400 nemabhiza* 12 000,+ uye akaita kuti zvirambe zviri mumaguta engoro uye pedyo namambo muJerusarema.+ 27 Mambo akaita kuti sirivha yaiva muJerusarema iwande sematombo, uye akaita kuti matanda emusidhari awande semiti yemitsamvi iri muShefera.+ 28 Mabhiza aSoromoni aitengwa kuIjipiti, uye boka revatengesi vamambo rainotenga mabhiza* acho akawanda richibhadhara mutengo waaitengeswa nawo.+ 29 Ngoro imwe neimwe yaitengwa kuIjipiti yaiita masirivha 600, uye bhiza raiita 150; vaibva vazvitengesa kumadzimambo ese evaHiti+ nemadzimambo eSiriya.
^ Kana kuti “nezvirahwe.”
^ ChiHeb., “hapana chakanga chakavanzika kuna.”
^ ChiHeb., “akasara asina mweya maari.”
^ Kana kuti “pemashoko enyu.”
^ Kana kuti “nedzemuzinda wamambo.”
^ ChiHeb., “zvaakamupa maererano neruoko rwaMambo Soromoni.”
^ ChiHeb., “vaitsvaga chiso chaSoromoni.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kubva kuIjipiti nekuKuwe; vanhu vamambo vaitengesa vainoatenga kuKuwe,” zvimwe kureva kuKirikiya.